YENZA INDAWO YOKUFUNDA - Fyrebox
Yenza eyakho Quiz kwiWebhusayithi yakho okanye iBhlog
Yenza ikhwizi ukwenza isikhokelo, ukufundisa okanye ukubandakanya abaphulaphuli bakho.
Thatha ukhenkethoYENZA INDAWO YOKUFUNDA
Imibuzo enye, Iifomathi ezimbini
Ukwenza umbuzo kunganceda ishishini lakho
Yenza owakho umbuzo ukuvelisa isikhokelo. Nokuba izikhokelo zakho zishishini kwishishini okanye kwishishini kumthengi, ikhwizi yindlela entle yokuvelisa isikhokelo kwiwebhusayithi yakho, iphepha lokufika okanye kwimidiya yoluntu.
Ungathumela idatha eqokelelwe yincwadi yakho ngokuzenzekelayo kwizicelo ezingaphezu kwama-300.
Izikhokelo eziveliswa ngumbuzo ongena kumjikelo wakho wentengiso ngokuzenzekelayo kwaye uqalise ukuvelisa ingeniso.
YENZA IBANGO LAKHO LESIPHELO
Idatha eqokelelwe ngumbuzo wakho yindawo yokuqala
Quiz unokufundisa nantoni na abafundi bakho. Ukusuka kwisikolo samabanga aphantsi ukuya eyunivesithi, ii-quizzes zenza ukuba imfundo ibandakanyeke kwaye ibe mnandi. Unako kwakhona ukuvavanya ulwazi lwabafundi bakho kwaye ufikelele kwiziphumo zabo ngexesha langempela.
Iingxelo zakho zemibuzo zizirekhoda ngokuzenzekelayo abadlali bombuzo wakho kunye neempendulo zabo.
Unokukhetha ukufumana ingxelo ngomdlali ngamnye okanye ubathume bonke
Kwiingxelo, unokufikelela kwiimpendulo zabadlali, ixesha abalichithe kwimibuzo yakho kunye nenqaku labo.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga nokwenza ikhwizi
Imibuzo ingasetyenziswa njengophando olwenziwayo. Unokubuza nawuphi na umbuzo kwaye ufumane ukufikelela kwiinkcukacha ngexesha langempela
Unokufikelela kubalo lwe-Quiz yakho ngexesha langempela.
Iinkcukacha-manani ezirekhodwa kwimibuzo yakho zikunika iziphumo zophando lwakho lweentengiso kwangexesha ukuze uqalise ukuthatha inyathelo.
YENZA IVANGELI LAKHO SIMAHLA